Iswaafajinta Iibka iyo Suuqgeynta: Saadaasha ugu Saraysa ee Mustaqbalka | Martech Zone
Jimco, Diisambar 2, 2016 Axad, Disembar 4, 2016 Douglas Karr
Waxaan dhawaan helnay wax cajiib ah wareysiga Giles House oo mid ka mid ah mowduucyada dooddu ka mid ahayd iswaafajinta iibka iyo suuq geynta. Ku cusbooneysii wareysigaas, Gudaha Dhexdiisa ayaa dhowaan daabacday saadaashan ku saabsan iibinta iyo isku hagaajinta suuqgeynta. Waxay ku saleysan yihiin buugga cusub, Loogu Talagalay Gaaritaanka: Sida Loo Mideeyo Kooxahaaga Iibka iyo Suuqgeyntu u Noqoto Hal Xoog oo Kobaca ah, waxaa qoray InsideView's CMO Tracy Eiler, iyo VP ee Iibinta Ganacsiga Andrea Austin.
Saadaashu waxay ku saleysneyd natiijooyinka sahan dhan 1,000 hogaamiyaasha iibka iyo suuq geynta. Cilmi-baarista Eiler iyo Austin waxay muujineysaa in dhibaatada isdaba-marinta ay sii kordheyso isla markaana go'itaanka xiriirku uu saameyn toos ah ku leeyahay dakhliga.
Is-waafajinta iibinta iyo suuq-geynta ayaa ah arin aad u kulul oo shirkadaha ay diiradda saaraan hagaajinta hal mar iyo dhammaanba. Kaliya maahan in iibka iyo suuqgeynta laga ilaaliyo inay isku dhuuntaan; maxaa yeelay isku toosintu waxay u tarjumaysaa dakhliga iyo koritaanka degdegga ah. Haddaba, maxaa xigi doona? Kadib bilo wadahadal aan la yeelanay asxaabtaada, waxaan saadaalineynaa meesha aan u maleyneyno in isku hagaajinta ay socoto si shirkadaha ay horay u sii socdaan Tracy Eiler, CMO ee InsideView
Qorayaashu waxay bixiyaan toddobada saadaal ee soo socda ee mustaqbalka iibka iyo iswaafajinta suuq-geynta maaddaama ganacsiyada ay garwaaqsan yihiin faa'iidooyinka iswaafajinta suuq-geynta iyo iibinta ayna isu diyaariyaan inay kordhiyaan dadaallada iswaafajinta sanadka 2017
Kordhinta iibiyaha la-tashiga. Dadka wax iibsada ee ugu guusha badan waxay noqon doonaan kuwo suuq isku dhex jira. Marka la gaaro 2020, baahida loo qabo iibiyaasha B2B way is beddeli doontaa si ay u dalbadaan "iibiye la-talin" ka badan, sida laga soo xigtay Forrester Research. Iibsadayaashu waxay samaynayaan cilmi-baaris dheeri ah oo iyagu mar dambe uma baahna iibiyeyaasha ku-saleysan macaamil ganacsi, sidaas darteed qaabka iibka dhaqameed waa inuu la qabsadaa Kuwani iibiyeyaasha la-talinta ah waxay noqon doonaan khubaro ku saabsan warshadooda, wax soo saarkooda, shaqsiyaadka wax iibsada, iyo safarka macaamiisha, waxayna u baahan doonaan karti u siinta suuqgeynta inta ay socoto. Warshadaha qaarkood xitaa waxay bilaabi doonaan inay ku midoobaan iibinta iyo suuqgeynta isla kooxahaas.
Tababbarka iskutallaabtu wuxuu noqonayaa mid lama huraan ah. Shaqaalaha ugu badan ee la doonayo waxay noqon doonaan kuwa raadiya khibradaha ka baxsan xeel dheer ee khibradooda, oo ay ku jiraan iibiyeyaasha fahamsan suuqgeynta iyo kuwa suuq geynta ku leh sooyaal. Shirkadaha horusocodka ah xitaa waxay qaabeeyaan oo ay dhiirigaliyaan tababbarka iskutallaabta ee goobta shaqada.
Dhuunta ayaa noqon doonta habka koowaad ee lagu cabiro waxqabadka suuq geynta.Sida laga soo xigtay cilmi-baarista InsideView, boqolkiiba 66 ee suuqleyda ayaa sheegaya in dhuumaha ay yihiin habka koowaad ee lagu cabiro. Shirkadaha horumarsan waxay bilaabi doonaan inay eegaan dakhliga kooxda, halkaasoo qayb ka mid ah kootada iibka kasta ay noqon doonto mas'uuliyadda suuqgeynta. Suuqgeynta ayaa dhiirrigelinaysa inay la shaqeyso wadashaqeyn dhow oo lala yeesho mid kasta ilaa heer ay dhab ahaantii qiyaasi karaan saameyntooda tooska ah ee kootadaas.
Dhamaan safarka macmiilku wuxuu noqonayaa mid ku saleysan xisaab. Hindisaha ABM wuxuu sii wadaa inuu ka fiicnaado maalgashiyada kale ee suuqgeynta, isagoo abuuraya qaab lagu guuleysto oo aan ku koobnaan doonin iibka iyo suuqgeynta mustaqbalka. Udiyaar garow shirkadaha si ay mudnaanta u siiyaan xisaabaadka wax kasta.
Istaraatiijiyadda xogta macmiilku waxay noqoneysaa mid aad muhiim u ah. Cilmi-baarista warshadaha ayaa muujineysa in ganacsiyada xogta geliya bartamaha suuqgooda iyo go'aamada iibka ay horumariyaan suuq-geynta ROI 15 illaa 20% (Kooxda Winterberry). Si looga faa'iideysto suuqgeynta sii kordheysa iyo tikniyoolajiyada iibka, shirkadaha guuleysta waxay mudnaanta siin doonaan dadaallada lagu hagaajinayo laguna xoojinayo kaabayaasha tikniyoolajiyadda iyo istaraatiijiyada xogta macaamiisha. Marka sidaas la yeelo waxay u oggolaan doontaa shirkadaha inay horumariyaan wadajirka, sirdoonka macaamiisha ee la wadaagayo oo awood u siinaya inay istiraatiijiyad badan iswaafajiyaan
Millennials waxay leeyihiin saameyn weyn. Sannadkii 2016 Millennials wuxuu dhaafey Carruurta Boomers sida jiilka ugu weyn waddanka. Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay inay beddelayaan qurxinta iyo xirfadda xoogga iibka. Millennials waa ganacsi, la qabsi, iyo iskaashi badan. Waxay sidoo kale leeyihiin rajo kala duwan xagga waxbarashada, isgaarsiinta, iyo horumarka shaqada. Shirkadaha guuleysta waxay bilaabi doonaan inay la qabsadaan qaababka abaabulkooda si ay u soo jiitaan una ilaashadaan hibada jiilkan ugu wanaagsan, waxayna tixgelinayaan in musharrixiinta ay diyaar u yihiin la jaanqaadka oo qayb ka ah nidaamka shaqaalaynta. Millennials-yada maanta waa kuwa iibsada berrito. Shirkaduhu waa inay la jaanqaadaan qaabkooda.
Akadeemiyadu way soo qabataa. Jaamacaduhu waxay u eegi doonaan barnaamijyada rasmiga ah ee B2B inay muhiim u yihiin u diyaarinta ardayda adduunka dhabta ah, iibka, suuqgeynta, iyo astaamaha xogta. Filo inaad aragto jaamacado badan oo bixiya shahaadooyin iibka ah, maahan kaliya suuq-geynta ama xisaabinta. Sidoo kale, hay'ado badan ayaa casriyeyn doona shahaadooyinkooda suuq-geynta ka baxsan suuqgeynta macaamiisha si ay diiradda u saaraan B2B. Ugu dambeyntii, filo darajooyin badan oo diiradda saaraya ganacsiga sayniska iyo xogta Analytics maaddaama xogtu ay muhiim u tahay guusha ganacsiga.
Waa tan faahfaahinta, 5-ta saadaal ee ugu sareeya Mustaqbalka Iibka & Iswaafajinta Suuq geynta:
Ku saabsan InsideView
InsideView waxay awood u leedahay wadahadalka ganacsiga adduunka, iyadoo ka caawineysa in ka badan 20,000 shirkadood inay dib u qeexaan istiraatiijiyaddooda suuqa u aadista ee ku saleysan mugga iyo habka bartilmaameedka badan. Hogaaminta sirdoonka suuqa madashu waxay ka caawisaa iibinta iyo kooxaha suuqgeynta inay si dhakhso leh u aqoonsadaan oo ay u-qalmaan bartilmaameedyada ugu fiican, ku lug lahaanshaha tixgelin dheeraad ah, xiraan heshiisyo badan, iyo sii-haynta iyo ballaarinta xisaabaadka. InsideView waa shirkadda kaliya ee ka bilaabanta shirkadda ugu saxsan warshadaha iyo xogta xiriirka oo ay ku wanaajiso aragtiyo ganacsi oo ku habboon, waqtiga-dhabta ah iyo isku xirnaan dhab ah.
Tags: suuq geynta xisaabtaiibinta latashigaiibinta latashigaCRMtababarka iskutallaabtaxogta macaamiishaisku waafajinta suuq geyntawaxqabadka suuqgeyntadhuuntaisku waafajinta iibkaiibinta iyo suuqgeyntaiswaafajinta iibka iyo suuq geyntawaxqabadka iibka